Iza no namerina nandika ahy? | Martech Zone
Andro vitsy lasa izay dia nanontany ahy ny olona, ​​ahoana no hahitako hoe iza no namerina nandefa ahy? Rehefa mampiasa ny endri-retweet ao anaty Twitter ny olona dia mora be izany. Afaka manindry ny fidirana amin'ny Twitter retweets amin'ny fizarana ankavanana. Ny tsanganana fahatelo dia Ireo bitsikao, Retweeted ary manome anao ny lisitr'ireo bitsikao rehetra izay naverina nakarina ary koa iza no nanao izany.
Misy koa ny API miantso haka ny data retweet momba ny sioka nomena. Ny famerenana amin'ny laoniny dia hetsika mendrika hotadiavina… raha misy olona mampiroborobo ny atiny dia manana mpisolo vava ho anao na ny marikao ianao. Olona mety tsy irinao ny hanaraka azy fotsiny, fa olona iray mety hikatsahanao fifamofoana lalina kokoa!
Mpanohana: Twitter dia fomba tsara iray hisarihana maso eyeballs marobe amin'ny hafatrao ara-barotra - fa ny ankamaroan'ny olona tsy mahalala izay ataony ary miafara amin'ny tsy fandraisany valiny. Na tsy ampy mpanaraka azy ireo, na mandefa hafatra diso amin'ny fotoana tsy mety na manao fahadisoana mahafaty iray na maromaro. Kitiho eto hianatra ny fomba hampiroboroboana mora foana ny etika manarakao ny Twitter.
Tags: bitsikaiza no namerina nibitsikaiza no namerina nibitsika ahy
Media sosialy + Analytics = Tsy marina
Marketing dripitra Fizarana 2: Aza mitsoka.
Sep 10, 2010 ao amin'ny 2: PM PM
Fetsy kely mifty. Misaotra namoaka an'i Doug!
20 Jan 2011 amin'ny 11:46 PM
Mahafinaritra hatrany ny mahita ireo lahatsoratra taloha velomina miaraka amina bitsika sioka! Iza no namerina nandefa azy io? 😉
Mar 16, 2011 ao amin'ny 1: PM PM
Salama namana, rehefa tsindrio ny tweet nataoko izay ao amin'ny faritra naverin'ny Tweet by Other, dia tsy misy lisitr'ireo nandefa azy io toy ny mahazatra azy. Misy hevitra maninona? na ahoana no ahitako hoe iza izy?
May 25, 2011 amin'ny 4: 06 AM
Namaky aho fa mety naverin'ny olona tsy arahinao sy ny olona miaro ny bitsik'izy ireo izany
Jul 9, 2011 amin'ny 1: 16 AM
koa ahoana ny fomba fiasan'ity app ity
Jul 9, 2011 amin'ny 2: 20 AM
Tsy fampiharana izany, Karberney, fa tena fiasa ao anaty dashboard Twitter.
Mar 6, 2012 ao amin'ny 4: PM PM
aona izay resy mahatsikaiky.
mihena kely, mandro, mandro, tapaho ny volombavanao ratsy, ary ny tena zava-dehibe, atsaharo ny miteny hoe hadalana adala toa izany ary ratsy kokoa, apetraho amin'ny Internet. Very adala resy
Mar 7, 2012 ao amin'ny 12: PM PM
Azonao ampiasaina ihany koa http://www.tweetreach.com, http://www.sharedcount.com, http://www.whotweetedme.com, ary iray amin'ireo loharano tsy azo inoana hahitana hoe iza no namerina nandefa anao taminao dia ho mpanolo-tsaina an'i Empire Avenue 'Kesley'.